यसरी जोगाउनुहोस् किड्नीलाई,यसरी हुनसक्छ ख्यालख्यालमै फेल - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । किड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई बिभीन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन जसका कारण हामिले ज्यानै गुमाउनु पर्ने समेत अवस्था आउँदछ । तसर्थ किड्नी भनेको के हो ?, मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि काम गरिरहेको हुन्छ, किड्नी कसरि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दछ र किड्नी बचाउनको लागि के गर्नुपर्दछ ? लगायतका कुराहरु जान्नको लागि पढ्नुहोस किड्नी सम्वन्धि १० महत्वपूर्ण जानकारीहरु ।
सन्दीप लामिछाने ‘प्लेयर्स टु वाच’को सूचीमा
काठमाडौं । सन्दीप लामिछाने विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताको ‘प्लेयर्स टु वाच’को सूचीमा परेका छन् । […]
विप्लबको बन्द आतंक ! स्कुल बसमा आगजनी,भारतीय भूतपूर्व सैनिक क्याम्पमा विष्फोट
बुटवल । बुटवलस्थित भारतीय भूतपूर्व सैनिक क्याम्पमा विष्फोट भएको छ । विष्फोटबाट क्याम्पको शौचालयमा क्षति […]
डा.देवकोटालाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि आफ्नै अस्पतालमा राखियो
काठमाडौं । वरिष्ठ न्युरो सर्जन स्वर्गीय डा‍.उपेन्द्र देवकोटालाई शुभेच्छुक र आफन्तले श्रदाञ्जली दिएका छन् । […]
ज्ञानेन्द्र शासनकालका गृहमन्त्री दान बहादुर शाहीको निधन
काठमाडौं । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाल रहेको बेला गृहमन्त्री रहेका दान बहादुर शाहीको निधन […]
हेलिकप्टर दुर्घटना : नवजात शिशुसहित एकै परिवारका चार जना को मृत्यु
काठमाडौं । गोरखाबाट बिरामी लिएर काठमाडौँका लागि उडेको फिस्टेल एयरको नाइन एन एके ए कलसाइन हेलिकप्टर […]